हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई रोजौं, स्थानीय सरकार इमान्दार खोजौं ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई रोजौं, स्थानीय सरकार इमान्दार खोजौं !
हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई रोजौं, स्थानीय सरकार इमान्दार खोजौं !
राष्ट्र आज नेपाली जनताको अथक सङघर्ष र बलिदान पश्चात युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै संघिय गणतान्त्रिक राज्यमा संस्थागत भएको छ । सयौं बर्ष देखिको अबैज्ञानिक राज्य संरचनालाइ ध्वस्त गर्दै सिङ्गो मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको बेला प्रवासमा रहेर पनि चुनावी माहोलमा केही कुरा राख्न मन लाग्यो । बास्तबमा बिदेशी भुमिमा रहेपनि हरेक पटक फेर्ने स्वास र धढकने मुटुमा अफ्नै देशको माया रहन्छ र यादले बेचैन बनाउँछ तर बिवसतामा बाध्य भएर मान्छे बिदेशमा रहन्छ । प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली आफू जहाँ रहे पनि आफ्नो मातृभुमी र रास्ट्रभक्तिको भाबनालार्इ बिर्सदैन र बिर्सनु पनि हुन्न ।
प्रसङ्ग स्थानीय निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ र उम्मेदवारहरुको सन्दर्भ हो । नेपाली जनताले जहानिया राणा शासनदेखि निरंकुश राजतन्त्रसम्म पटक पटक विभिन्न शैलिमा आन्दोलन गर्नुपर्यो । भनिन्छ शासन ब्यबस्था प्रणाली आफैँमा नराम्रो हुँदैन तर त्यसलाई नेतृत्व गर्ने मियो र शासकहरुको कार्यशैलिमा भर पर्द्छ । यसै तथ्यलाई मध्येनजर गर्दै हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने महानायक जनप्रतिनिधिहरुको अत्यन्तै बिबेक प्रयोग गरी छान्न सक्नु पर्द्छ, ताकि यिनिहरु भोलिका खलनायक पात्र नबनुन । हामीहरु आज न्यायाधीशको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । कस्लाइ न्यायोचित फैसला दिने भन्ने बारेमा हाम्रा सामु विभिन्न पार्टीका थुप्रै उम्मेदवारहरु वकालत गर्न आइराखेका छ्न ।
सर्बप्रथम हामीले नयाँ स्थानीय संरचनालार्इ हाँक्न सक्ने नवीनतम सोच र शैली भएका सारथिहरुलार्इ छ्नौट गर्नसक्नु पर्दछ । हामी आबेग र लहिलहिमा नलागी बिबेकशिल पात्र छनौट गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसको लागि ती उम्मेदवारहरुको बिगतको पृष्ठभुमि, रास्ट्र र समाज प्रति गरेको त्याग शैक्षिक योग्यता दुरदर्शिता अनुभव जबाफदेहि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्ने सामर्थ्यता भएको हुनुपर्दछ ।
तिनीहरुको राज्यसंचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनुभव हुन जरुर छ । पुरानो चिन्तन र कार्यशैलिलार्इ परिवर्तन नगरी अगाडी बढने जो कोहि जनप्रतिनिधिहरुले समाजको परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । अन्यथा पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी शिवाय केही हुनसक्दैन । जस्को बिगतको छवि धमिलो छ र उस्ले आफ्नो राजनीति पार्टीहरुलार्इ प्रभावित पारी उम्मेदवार बनेका छन तिनिहरुबाट समाज निर्माणको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । हामीले त्यस्ता ब्यक्तीहरुलार्इ बेलैमा पहिचान गरी अस्वीकार गर्न सक्नु पर्द्छ ।
राज्यले लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि बिहिन अवस्थामा स्थानीय निकाय संग कार्यसन्चालन गर्न बाध्य भयो । बिकासका योजनाहरु अव्यवस्थित ढंगले अगाडि बढे भने जनताप्रति उत्तरदायी शैली करिव समाप्त नै हुन पुग्यो । घुसखोरी नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारले प्रायजसो स्थानीयनिकाय मौलायो । अनि जनताका काम ठप्प हुनगए । रातारात आफ्नो हैसियत भन्दा माथी धन आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा बढदै गयो । यसकारण म नेपाली नागरिकको हैसियतले सम्पुर्ण आदरणीय मतदातहरुलार्इ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले पुरानो गल्ती नदोहोर्याउँ, र जनताप्रति जिम्मेवार कर्तब्यनिष्ठ जनप्रतिनिधिको चयन गरौ । जस्ले जनताको पिर मर्कालार्इ आफ्नो पीर मर्का सम्झेर हरेक पल जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ अनि महिला हक, सामाजिक सुरक्षा, अपांग वा फरक क्षमता भएका ब्यक्तीहरुको अधिकार सुनिश्चितता गर्न तर्फ अगाडी बढदछ । स्वच्छ शुशासन भ्रष्टाचार रहित समाजको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
अन्यथा हाम्रो अमुल्य मत खेर गई नालायक पात्रहरुले हामी प्रती शासन गर्ने छन । कसैको करकापमा नलागी भावनामा नबगी सक्षम र योग्य उम्मेदवार छान्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । नत्र भने वर्षाको बेला भाँडो नथाप्ने वर्षा रहेपछि भरी भाँडो खोज्ने प्रवृत्ति हुनेछ ।
२०७४ वैशाख १६ गते ११:३४ मा प्रकाशित
टान अन्तर्राष्ट्रिय लाङटाङ म्याराथुनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
एनबी बैंकमा कस्ले बुझ्यो कति तलब भत्ता ? शेयरधनीको चरम विरोध !